Shoe umkhakha - Digital Ukukhiqiza Co., Ltd.
3D zokunyathelisa kuqinisa izicathulo umkhakha
A nqwaba Nike izicathulo ezinyatheliswe SL 3D iphrinta Shanghai isikhungo iwuhlelo esitolo
Eminyakeni yamuva, kancane kancane 3D zokunyathelisa ubuchwepheshe singene emkhakheni walokho ukwakha izicathulo. Kusukela kanban izicathulo isikhunta ukuze sanding izicathulo isikhunta, ukuze isikhunta ukukhiqizwa, ngisho siphelile izicathulo amathe, kubonakala sengathi 3D zokunyathelisa ubuchwepheshe kungabonwa yonke indawo. Nakuba 3D ephrintiwe izicathulo angakafakwa yawenza e izicathulo ezitolo, ngenxa design ezingaba futhi ngokwezifiso amathuba izicathulo 3D ezinyathelisiwe, abaningi izicathulo imidondoshiya ekhaya aphesheya njalo baye benza imizamo kulobu buchwepheshe ensimini abasafufusa kule minyaka yamuva.
Ukusheshisa yokuqinisekisa design futhi unciphise umjikelezo ukuthuthukiswa
Ngo zisandakuqala nezicathulo design, amasampula izicathulo isikhunta ngokuvamile asetshenziselwa amathuluzi bendabuko ezifana lathes, sokuprakthiza izingcezu, imishini isibhakela, futhi imishini ekubumbeni. Inqubo ukukhiqizwa kwaba kakhulu isikhathi esiningi futhi ngakhula isikhathi esidingekayo imiklamo ukuze enze imikhiqizo nokuqinisekisa izicathulo isikhunta. Ngokuphambene, 3D zokunyathelisa kungaba ngokuzenzakalelayo futhi ngokushesha ukuguqula amasampula ikhompyutha izicathulo ku onobuhle, okuyinto Onqobayo hhayi kuphela ukulinganiselwa izinqubo bendabuko, kodwa futhi ibuyisela Design Umqondo kangcono, futhi ibambisane ukuhlolwa umkhiqizo kanye nokwenza.
Unlimited by isakhiwo, ukusebenza kahle eliphezulu futhi eguquguqukayo
Kususelwa izinzuzo yedijithali ukukhiqizwa okusheshayo, ukuphrinta ubuchwepheshe 3D ayikho into engavimba isakhiwo, okuvumela abaklami ukuba yilo ugqozi yabo. Ngaphezu kwalokho, i-3D zokunyathelisa Ukuzivumelanisa nezimo kusiza abaklami ukuba ushintshe amadizayini banciphise izindleko sikubeke ngenxa isikhunta sibuyekeze.
ukuphrinta 3D alows le posibility of ngokwezifiso personalilzed
kulindeleke ukuthi izicathulo 3D ephrintiwe kungenziwa costomization ngokwakho nezakhamuzi. Ngokuvamile, ngenxa izindleko izinqubo, izinto zokusetshenziswa, ucwaningo nentuthuko, intengo izicathulo ngezifiso lingaphezulu kakhulu kunalelo izicathulo abavamile. 3D zokunyathelisa kunganciphisa izindleko isikhunta, unciphise umjikelezo ukuthuthukiswa futhi ahlinzeke ukusetshenziswa impahla. Esikhathini esizayo, it is kulindeleke ukuba nezidingo ngabanye abathengi enqubeni ukukhiqizwa ngesikhathi kuncishiswa izindleko zokukhiqiza wamabhizinisi.
Sungula ikhasimende unyawo Imininingwane egciniwe
3D zokunyathelisa kusekelwe 3D Imininingwane idatha ukumodeliswa wezigi yekhasimende, bese isebenzisa 3D iphrinta ukukhipa insole, amathe futhi izicathulo ezivumelana ngokugcwele unyawo ukuma yekhasimende, usheshisa nokwenza komugqa umkhiqizo, futhi ngokuletha esisebenzayo obonisa endaweni yesikhulumi ngezifiso embonini nezicathulo.
ngokwezifiso Personalized: 3DSL-360 & 3DSL-450
ukukhiqizwa Iqoqwana Small: 3DSL-600 & 3DSL-800